RIVE: ဖျက်ဆီး, Hack, သေ, ပြန်ကြိုးစား! စက်ရုပ်ရိုက်ကူးခြင်းနှင့်တိုက်ခိုက်ခြင်းဂိမ်း။ ငါက Mac ပါ
RIVE: ဖျက်ဆီး, Hack, သေ, ပြန်ကြိုးစား! တစ် ဦး ကစက်ရုပ်သေနတ်သမားနှင့် hack ဂိမ်း
Mac App Store တွင်ရရှိနိုင်သည့် application အသစ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ ဆက်လက်၍ ဤအမှု၌ Mac application store တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သောစက်ရုပ်သေနတ်နှင့်ဂိမ်းကိုပဲ့တင်သံလိုသည် RIVE: Wreck, Hack, Die, Retry! ပလက်ဖောင်းများနှင့် ၃၆၀ ဒီဂရီသေနတ်သမားအကြားရှိပေါင်းစပ်ထားသောအနေဖြင့်၊ သင်သည်အံ့ batt ဖွယ်တိုက်ပွဲများတွင်“ ပျက်စီးခြင်းအကကို” ကခုန်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ RIVE သည် ၂၁ ရာစု၏စတိုင်လ်တွင် megapixels များကိုထည့်သွင်းတပ်ဆင်ထားသောအတိတ်ကပေါက်ကွဲစေသည့်ဂိမ်းများကိုအမှတ်ရစေသည်။
အစအ ဦး ၌တင်ပြခဲ့သောဗီဒီယိုတိုတွင်သင်မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း၊ ဂိမ်းတွင်လုပ်ဆောင်ချက်များစွာရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ Mac ရှေ့တွင်ကောင်းမွန်သောအချိန်ရှိစေရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ငါတို့မှာတိုက်ထုတ်ဖို့မြေအနေအထားအမျိုးမျိုးရှိသည်။မြေပေါ်၊ ရေအောက်၊ သုညဆွဲအားသို့မဟုတ်ရွေ့လျားနေသောရထားပေါ်တွင်! ဂိမ်းကိုယ်နှိုက်၏ဖော်ပြချက်တွင်၎င်းတို့သည်အသစ်မဟုတ်သည့်ဤဂိမ်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားသတိပေးပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော်ယခု Mac App Store တွင်အသစ်အဆန်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။
ပင်လယ်ဓားပြ module တွေစုဆောင်းနှင့်သင်၏ရန်သူများကိုထိန်းချုပ်ပါ
သင်၏ Spider Tank ၏အထူးတိုက်ခိုက်မှု၊ သံချပ်ကာနှင့် Loot Magnet များကိုအဆင့်မြှင့်ပါ
Mark Dodson (Star Wars နှင့် Gremlins) တို့၏အသံဖြင့် ၆ နာရီကျော်သောကင်ပိန်းတစ်ခု
Roughshot, Butler စက်ရုပ်များ, အာကာသလုယက် ... နှင့်အံသွားနှင့်အတူနက်ရှိုင်းသောဇာတ်လမ်း
Time Attack နှင့် One Life mode များတွင်သင်၏တန်ဖိုးကိုသက်သေပြပါ
ဂိမ်းကစားခြင်းကိုရွေးချယ်သောအခါ၎င်းတို၏နေ့စဉ်စိန်ခေါ်မှုများနှင့်အဆုံးမဲ့စစ်မြေပြင်များနှင့်ကစားနည်းများစွာကိုခွင့်ပြုထားသည်။ ဒီဂိမ်း၏နေရာကတော့ 836 MB ဖြစ်သည် ၎င်းသည်အလွန်အစွမ်းထက်သောစက်မလိုအပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ install လုပ်ရန်လိုအပ်သည် OS X 10.7 သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်း.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ပရိုဂရမ်များ » အားကစားပြိုင်ပွဲ » RIVE: ဖျက်ဆီး, Hack, သေ, ပြန်ကြိုးစား! တစ် ဦး ကစက်ရုပ်သေနတ်သမားနှင့် hack ဂိမ်း
Apple Watch အသစ်ကဆီးချိုရောဂါကိုကုသရန်ကူညီနိုင်
F1 2016 ကိုယခု Mac App Store တွင်ရနိုင်သည်